LinkedIn waxay ku xisaabtami картаa suuq yar oo isticmaalaya marka la barbar dhigo Facebook iyo Twitter, laakiin lambarradu weli way ku habboon yihiin bloggers iyo maareeyayaasha warbaahinta, gaar ahaan haddii niche ama warhadu tahay B2B. Sida laga soo xigtay Statista, LinkedIn ayaa ku faantay 450 мільйонів користувачів ayaa isticmaala rubuc 2da 2016, iyo barxadda sii kordhaysa.
Tirada xubnaha LinkedIn laga bilaabo 1 квартал 2009 illaa 3 квартал 2016 (малаяїн)
Tirooyinka ka sokow, inkasta oo oo ay tahay, bulshada ayaa tirinaysa. Iskuxirka ‘InteedIn’ wuxuu ka badan yahay резюме-ka tooska ах ае internetka iyo hodantinimada kooxaha adeegsadaha, astaamaha farriinta iyo madbacadda daabacaadda Pulse waxay ka dhigeysaa fursad suuq-geyn weyn.
1 1. Сій Сідхійд’яда Марка хору
3 3. Імпульс LinkedIn Pulse
4 4. Обговорення групи для обговорення
4.1 Кобака Шабакадаада
6 6. Залучення інших 4 Meelaha ugu muhiimsan ee Mawduucyada
6.0.1 1. Фотографія профілю
6.0.2 2. Посилання посилання
6.1 3. Функція завантаження файлів
6.1.1 4. Ісдекса галка Савірка
8 8. Рааді Талуойн (Qancin)
8.1 "Si aad uga soo baxdo dadka intiisa badan internetka, waxaa aad loogu talinayaa in aad is dhisto dareen ах kalsooni iyo kalsooni."
9 9. Isticmaal @mentions iyo Оновлення
11 БОНУС №1 – Ku xayeysii LinkedIn
12 БОНУС №2 – Istaraatiijiyooyin LinkedIn ах
12.2 Fariimaha Цільове призначення: Istaraatijiyad Tallaabo-tallaabo ах
Сіда Шон Мартін, maareeyaha suuq-geynta ee ku jira Talo-bixinta Talo-bixinta, wuxuu leeyahay:
LinkedIn waa goob weyn oo lagu kobciyo qaybaha aad ka kooban tahay oo ka kooban dhagaystayaal la xiriira. Waxay sidoo kale ku fiican tahay xayeysiinta adeegyadaaga sababtoo ах awooda ay u leedahay inay begsato danaha, demograafiga, iyo qaybaha shaqada.
Waxaad dooneysaa inaad ka faa iideysato awoodaha bartilmaameedka ах ee LinkedIn, sidoo kale aad u wanaajiso xayeysiintaada si aad u soo saarto nooca taraafikada aad raadineyso.
Тані ваа досвід кальсоні ванаагсан ой ах у LinkedIn la isku dayo, laakiin Oren Greenberg, markhaatiyaal dhijitaal ах iyo agaasime maamul Kurve.co.uk, wuxuu ku darayaa xoogaa macquul ах. Waxa uu eegayaa in [ka dib] dhammaan ololaha imtixaannada ay nagu hayaan annaga iyo hay’ado kale oo dijital ах aad u sarreeya. "
Sidoo калі, сида Лаг Су xigtay Грінберга, LinkedIn Ayaa сі fiican у Су bandhigay, natiijooyin wanaagsan оо чи siiyey Marka чи barbardhigo Dhexdhexaadinta Його Блогінг (haddii AAD horay у haysatid daawadayaasha Boggan), sababtoo ах LinkedIn waxay сі dhakhso ах у ogeysiinaysaa shabakadaada, haddii maqaalkaagu uu yahay mid la wadaagayo, arko martiqaadkaaga korriinka iyo xitaa saamiyada ay ku leeyihiin waddooyinka kale. "
1. Сій Сідхійд’яда Марка хору
Astaamaha aasaasiga ах waxay ka shaqeeyaan LinkedIn sida ay ku sameeyaan meherad kasta oo kale ee warbaahinta bulshada – waa inaad waqti ku qaadato LinkedIn si aad u dhisto joogitaan. Оо, ваа інаад удіаарисаа ікс ксірнаанта сіад угу дамбейнта у самсисо шабакад ку саабсан магакаага ійо ганаксігаага.
Waxaan qoray hagaha aasaaska suuqyada suuq-geynta suuqa й 2014 в Лаге yaabo inaad rabto inaad віск akhrido сі AAD у bilowdo, waxaanan Су jeedinayaa inaad sidoo калі fiiriso boostada KeriLynn й ка тал Siday siyaabaha suuq-geynta 6 WAA сида shukaansi.
Сі гаар ах:
Ogeysiis taxaddar: xaqiiqda ах в LinkedIn Лоо abuuray xiriirro xirfadeed ма у oggolaanayo dadka isticmaala inay ка fikiraan Madal inay yihiin guddi khayaamo, nasiib darrose LinkedIn Валі Ума muuqato inay leeyihiin siyaasad xooggan оо ка Су horjeeda dhaqannada shadiida.
Sidaas, samee waayo-aragnimo weyn oo ku saabsan LinkedIn aad, oo aad u xulasho badan oo ах ах xiriirada aad codsato ama aqbasho.
Alayna Frankenberry, maareeyaha istaraatiijiga ah ee loogu talagalay Eeg EE BlueSky, waxay soo jeedinaysaa здалеку siyaabood oo aad ku dhisi kartad joogitaanka LinkedIn oo aad adigu naftaada u samayso mid kah dadka aadaa aaka aaka aaka aaka aadka aaeka aaka aaka aaeka aadka aaeka aaka aaka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaeka aaka yaeka aaeka aaka aaka aaka aaka aaka aha
Шлях fududahay в dadku dhagaystaan ​​khabiir dhinaca warshadaha ах halkii laga dhigi lahaa inay ku hawl galaan koonto shirkad aan wajiyo lahayn, ayuu yidhi Frankenberry. "Haddii aad naftaada u moodeyso inaad tahay hogaamiyaha fikirka ee warshadahaaga, hogaamiyaasha кале iyo go’aan sameeyeyaasha ayaa ogaan doona – waxayna aad ugu dhowdahay inay baaraan shirkaddaada, macaamihejada iyo."
Frankenberry wuxuu intaa ku daray inaad wali la wadaagto qoraallada oo aad si joogto ах у cusbooneysiiso koontadaada sumadda, laakiin waa inaadan hilmaamin astaamahaaga habraaca.
2. "Ваа інаад firfircoonaato subaxa.
3. "Noqo середина deeqsi ах."
Frankenberry wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad “ku taageerto asxaabtaada xirfadaha halka ay ku fiican yihiin”, iyo inaad “u qorto talooyinka shaqaalahaaga, macaamiishaada iyo maareeyayaashaada, iyadooaan weingay weingay wax lax wax. Tani Калій кум хели doontid qaar ка середини ах dammaanadaha Isku середини ах, «laakiin sidoo калі waxay hagaajin doontaa jiritaankaaga xiriiriyahaaga ‘waxayna його horseedi doontaa booqashooyin Бадан оо AAD ка tagto astaantaada Їх dhajinta bogaggaaga.
Dadka intiisa badani waxay isticmaalaan ‘LinkedIn’ sababtoo ах waxay daneeyaan waxyaabaha ay ka midka yihiin horumarinta xirfadda iyo kobaca ganacsiga. La wadaag waraaqaha bixiya xalka dhibaatooyinka ganacsiga guud iyo talooyin воск ку оол ах ку ку saabsan sida loo gaaro yoolalka. "Frankenberry waxay ku xasuusineysaa inaad" diiradda saarto xalalka halkii aad iskaa u dallacsiin laheyd, "markaa waxaad arki doontaa isticmaaleyaasha" oo soo laaban doona mar labaad si ay ula falgalaan adiga iyo wadaag waraaqahaaga. “
Isticmaal nidaamka isgaadhsiinta Його isgaadhsiinta Isgaadhsiinta LinkedIn waxay ку siinaysaa Isku-xidhka shakhsiyadeed й xiriiriyeyaashaada ка Hor Інта aanad Су wacin сі AAD ули xiriirto dadka калі й ка JIRA naftaada InMail haddii AAD tahay isticmaale Bixiye ах, ама emaylka qofka ка muuji cinwaankiisa ‘LinkedIn’ оо ka hooseeya tab taabashada).
Nidaamka fariimaha isku dhafan ee proba xirka / wada hadalka
Farriinta (iyo sheekada, tan iyo markii la isku daray 2015) isla markiiba ka dib abuurista xiriirka – iyo muujinta dareen dhab ah iyaga iyo waxa ay qabtaan – waxay sidoo kale gacan ka geysan kartaa abuurista atadeoo kairigoadi.
Waa muhiim inaadan dirin wax farriin ahmiyada-u eg-ах wajiga hore, wajigaan xasaasiga ах. Ka fiirso arrimaha aadanaha:
Fursad aad ku hormarineyso shaqadaada ayaa si dabiici ах у imanaysa iyadoo qofka kale uu xiiseynayo adiga.
Markaad [weydiisid] inaad la xidhiidho qof, ha sameynin haddii ujeedadaada gaarka ah ay tahay inaad isku daydo inaad ka faa’iidaysato xidhiidhkooda si kor loogu qaado віск. Marka qof uu sidan iigu sameeyo, waan la xidhaa iyaga.
LinkedIn runti aad ayey uga badan tahay madal ay xirfadlayaasha iyo shirkadaha ka ganacsadaan danaha. Waa goob lagu dhiso xiriirro, taas oo aakhirkii isu rogi doonta fursado wanaagsan oo labada dhinacba ах.
Ерік Брантнер, оаааасай Scribblr.com, воксай ка тало біксинейсаа інай курайнін воск ку оолка аааладда ісгаарсіінта ее “LinkedIn” іегаарсіінта qaddarinta lacageed (InMail), Гаар ахаан блогер ійо васігілінта.
Фураха аяа ах у ла хубійо інаад леедахай кейейб яр, оо си фіікан лоо дхісай. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad hubiso in bartilmaameedku yahay dhagaystayaasha saxda ах ee garoonkaaga.
Sidoo kale akhriso Dan Virgillito 4 Siyaabaha Loo Heli Karo Hogaamiyeyaal Shirkadda LinkedIn ах wixii faahfaahin dheeraad ah iyo macnaha guud.
3. Імпульс LinkedIn Pulse
Пульс LinkedIn Еда Гандії
Si kale haddii loo dhigo, waxaad rabtaa inaad u tagto boostada Pulse sida aad u fiican sida blog posts – wax yar oo yar, malaha.
Шон Холл, Мікілаха TekBoost, wuxuu ku raacsan yahay в "bixinta bogga internetka ee LinkedIn uu yahay istaraatijiyad aad u wanaagsan oo lagu helo soo-bandhigid dhagaystayaal cusub, iyada oo la adeegsanayo shabakadaada hadda jira," iyo в "ujeedadu tahay in la bixiyo waxyaabaha la wadaagi karo."
Waxaad rabtaa inaad daabacdo "воск ай тахай у таагераяашаадау ай си дхаб ах у ксіісейнаян інай аркаан, ой ка фекераян інай ла вадаагаан таагераяашоода. Natiijadu waa soo-gaarsiinta kor u qaadka, gaar ahaan marka gabal-soo-rog uu ku dhaco fayras. "
Teajai Kimsey, agaasimaha suuqgeynta Кришталеві споруди Склопакет, воск у maleyneyaa в qarsoodiga guusha ee LinkedIn uu yahay mid ku hawlan.
Kuma filna in lagu qoro astaan ​​qoran oo qoraal ах ах iyo khadka tooska ах. Waa inaad ku dhejisaa waxyaabo si joogto ah u hawl gala dadka adiga kugu xidhan; Waxyaabaha ka baxsan waxyaabaha caadiga ах laakiin maskaxda ka haysta ganacsi. Markii aan dhajiyo waxyaabo wanaagsan, waxaan arkaa dad badan oo eegaya macluumaadkeyga, oo codsanaya xiriiriyaal iyo wixii la mid ah, oo faallo ka bixinaya wixii aan halkaas ku dhigay.
Si ka duwan kooxo kooxeed iyo faallooyin, waxaad ku kori kartaa hay’ad ku taal naftaada markaad billowdo daabacaadda maqaallo soo jiidasho leh oo cunto u fekeraya magacyada waaweyn iyo kuwa yaryar ee itatihahaka taka bulhadaada Linkayed.
Maskaxda ku hay in boostadaada Pulse ay tahay inay jiraan si kor loogu qaado waxyaabaha ku kooban bartaada, kaliya maahan inaad la wadaagto aqoonta warshadaha bulshada LinkedIn. Tani WAA muhiim sababta оо ах waxaad dooneysaa inaad Сара у qaaddo hawlgelinta labadaada muuqaal Ій Bloggaaga, Келі кума Ахана Labada середини midkood, Marka waxaad dooneysaa inaad ка dhajiso Калій waxyaabaha ка habboon WaXa AAD horey у sameysay оо AAD воску ка qorto bartaada.
Крістін Віола, agaasimaha suuqgeynta TheMLS.com, аяа-ла-огадай: "[Waxaa jiray] kor u kaca codsiyada markii aan ku xirannay boggayaga asalka ах ee asalka ах iyo waliba maqaallo ku saabsan CEO-ka ayaa laga soo xigtay. Hal maqaal ah oo aan soo dhajinay (agaasimaha ayaa laga soo xigtay) ayaa ka helay aragtiyo ka badan 1,200. Tan iyo markii aan nahay nidaamka MLS, waxaan mar walba isku daynaa inaan dirno waxyaabaha ku saabsan mulkiilaha munaasibka ах kaas oo ku saabsan dhagaystayaasheena. "
4. Обговорення групи для обговорення
Waxaa Лаг yaabaa inay у muuqato в ау у muuqato в ау ке celiso Халкалі, laakiin ке faa’iideysii kooxaha ВАДА hadalka Й LinkedIn, мо ах оо Калій inaad bilowdo Adiga keligaa, laakiin adoo ка jawaabaya xeeladaha JIRA й Badan й suurtogalka ах.
Генрі Батлер, lataliyaha suuq-geynta CanIRank, waxay soo jeedinaysaa in aad ka qaybqaadatid kooxo xiriir la leh LinkedIn kuwaas oo gaari kara taraafikada la begsanayo profile iyo blogka:
Середина ка серед ай фаа’іідада LinkedIn ее ка джирта каналада кале ее варбаахінта бульшада ваксаад ка хелі картаа тараафікада бартімамед дхеераад адоо ку біірая ійо кор у qаадая маклуумаадкаага коохаха булшада воєн ей ла хаіраіра. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad magaca shirkadaada ku horayso dadka u muuqda in ay xiiseynayaan badeecada ama adeegga aad bixiso.
Джулі Графф, сиріярія арімаха бульшада Суука Соодейта, воксай кугула талінайсаа інаад "hesho oo ku biirto Kooxaha soo jiitay dhageystayaashaada bartilmaameedsan" iyo "si firfircoon ula shaqeeya, ka jawaab su’aalaha soo bandhigay iyo bixinta macluumaad wax ku ool ах wadahadalka."
Waxaad sidoo kale (si taxadar leh) uugu soo diri kartaa xiriirinta waxyaabaha aad ubaahantahay, haddii ay tahay mid qiimo badan u leh kooxda oo aaney is-tarin. Isticmaalida kooxahaan sidan waxay gacan ka geysan kartaa dhisida wacyi-gelinta, udub dhexaad u tahay, iyo kaa caawiso inaad dhisid xiriiro dhab ah oo lala yeesho xubno ka mid ah dadka dhageystayaasha aha.
Fikradda kale waa in ku biir kooxaha kooxaha xayeysiinta halkaas oo xubnaha oo dhami ay u joogaan inay gacan ka geystaan ​​horumarinta midba midka kale shaqadiisa. Блог промоушн Блог промоушн групи Mastermind hadda LinkedIn, в блозі про те, що написано блог haddii блог ада Хорі і Шешо Гаадідіка Qaar.
Wadahadal kooxeed waxay faa’iido u tahay kor u qaadida shabakadaada. Sida Doug McIsaac, о-а-латаліяха suuq-geynta caalamiga ах TheLinkedCoach.com, faallooyin, "Qodno muhiim ах – marka qof uu ka raadiyo LinkedIn, waxay arkayaan natiijooyinka shabakaddooda marka hore. Haddii aad rabto inaad soo bandhigto raadin dheeraad ах, waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso koritaanka shabakadaada. Tani waa mid aad uga muhiimsan haddii aad hayso xalka dadka raadinaya warhado gaar ах. "
Шон Холл восковий кугула талінейсаа іє сільфіркон уга кейб гашо фадхіяда ла xiriira Q&A-da warhado ahaan “hab xoog leh oo lagu dhiso xiriiryo adag isla markaana khibradahaaga warshadaha lagu soo bandhigo. Furaha ayaa ах в la hubiyo в aad ku darsato qiimaha wadahadalka, oo kaliya in aan si cad u aflagaadeyn shirkaddaada ama alaabadaada.
Si aad u soo koobto, waxaad abuurtaa doodo ku habboon naftaada oo ku lug leh bulshada, taabashada mawduucyada iyo xaglaha ku xiran tiirarkaaga blogga ama farriinta ganacsiga iyo content.
Waxaad rabtaa inaad si sax ah uga feejignaato dadka saxda ах oo siiso sawir gaar ah oo naftaada ах, waxaad samaynayso iyo waxa kuu qabanaya.
Doug McIsaac wuxuu kugula talinayaa samaynta cinwaankaaga ” віск ka dheh воск soo saarka ama adeegga aad soo gudbiso. ‘Waxaan ka caawiyaa macaamiishayda ku habboon inay gaaraan natiijooyinkooda ku habboon’ ama ‘waxaan u soo bandhigo natiijooyin ku habboon macaamiishayda ku habboon’.
Cinwaankaaga sidoo kale wuxuu noqon karaa mid ka badan oo tan: Neil Patel isticmaalaa ‘Співзасновник у Crazy Egg & Hello Bar ‘oo waxaan doortay’ Позаштатний блогер, копірайтер, мультфільм ‘нафтайда.
Waxa muhimka ах waa “інаадан ка dhigin inaad aad ugu egtahay meel tuug ах”, ayuu yiri khabiir ku xeel-dheer suuq-geynta Chelsea Hewitt. Xaqiiqda Caalamiga ах ее аан xadidneyn ee Sotheby. "Qoraalku waa inuu lahaadaa xoogaa wax lagu qurxiyo [booqdayaasha] gujinaya oo ka dhigaysa inay xiiseeyaan ku soo noqoshada boggaaga ama boggaaga mustaqbalka."
Si kooban, McIsaac wuxuu cadeynayaa в:
Isla mar ahaantaana, waxaad kaloo dooneysaa inaad soo koobto ugu yaraan shakhsi ahaan, sababtoo ах qofka akhriya wuxuu doonayaa inuu ogaado codkaaga iyo maskaxdaada.
Sida aniga oo kale, Sarah Boutwell Geek Powered Studios, waa fikradda ах inaad u isticmaasho qofka koowaad haddii aad qorto astaamahaaga.
Waxay kaa dhigaysaa mid aad cod badan ku yeesho aadanaha iyo sida aad dhab ahaan uga dhigtay fikir iyo dadaal inaad ku qorto astaantaada. Astaantaada kaliya maahan резюме, waxay u badantahay aragtida shaqsiyeed ee aad tahay xirfadle. Ha ilaawin inaad kudarto waxa kaa dhigaya qof weyn oo shaqeeya la, ma ahan oo keliya waayo,.
6. Залучення інших 4 Meelaha ugu muhiimsan ee Mawduucyada
Marka, marka lagu daro cinwaankaaga iyo koobigaaga (Sharciga № 5), waxaad abuuri kartaa aragti fiican.
1. Фотографія профілю
Dareenka koowaad ee tirinta, marka marka aad ku dhejiso sawirkaaga sawirka, hubso in tani ay tahay mid saaxiibtinimo, nadiif ах oo xirfad leh.
"Xiriirka ugu weyn ee LinkedIn waa sannadihii 30-50," ayuu yiri Hewitt. "Kooxdan da’da ах waxay inta badan ku noolyihiin shaqsiyaadka leh dhaqdhaqaaqyo isdaba-joog ah oo ku saabsan shaqada, dhaqdhaqaaqqada bulshada, dhacdooyinka qoyska iyo wax ka badan! Fure u ah helitaanka dareenka inta lagu jiro boodh gaaban oo ku saabsan feedhadeeda LinkedIn waa in la helo sawir cajiib ah oo la socota cinwaanka gaaban laakiin xiiso leh taas oo ka dhigi doonta inay joojiyaan oo wax badan barta. "
Taas macneheedu waa sawirkaaga sawirku waa inuu si fiican у shaqeeyo cinwaankaaga oo u eeg sida ugu fudud ee suurtagal ах natiijooyinka wanaagsan.
2. Посилання посилання
Muuji joornaaladaada ugu fiican ee blogga, boostada martida iyo ebooks lacag la’aan ah sida daabacaadda ku saabsan xiriirka LinkedIn.
Qaybtani waxa ay ka dhigaysaa miisaan gaaban oo martidaadu ay u eegi karaan "тіаабінта" khibradaada iyo kartadaada.
3. Функція завантаження файлів
Shaashadda kor ku xusan waxay muujineysaa sida aan kuugu darey sawiradaada loogu talagalay Machadyada Institute of Writing Institute ee khibradda shaqada ee la xidhiidha qaybta "резюме" кайбтайда.
Waxaad faylasha faylasha u gudbin kartaa qaybtaada kooban, khibradaha iyo qaybaha waxbarashada. Kuwani waa kumbiyutarradaada, caddaynta koowaad ee khibradaada iyo khibradaada.
4. Ісдекса галка Савірка
Tan iyo markii LinkedIn uu xayeysiisay SlideShare ee 2012, болгарія і sahlan ayaa looga heli karaa shabakadda bulshada, si fudud ayaad kuugu soo dari kartaa bogaggaaga iyo bandhigyadaada si aad u hesho qof walba si aad u akhrido.
"Muuqaaladu waa mid ka mid ah waxyaabihii isha kuugu xirnaa ee ku xirnaa bogga LinkedIn ama bogga ganacsiga," аюу ірі Сара Бутвелл. Kuwani waxay noqon karaan fiidiyoow, sawirro, calaamado, isku xirnaanta, sawirada sawirada, shaashadaha iyo sawirada.
LinkedIn waxay leedahay muuqaalo badan oo dheeraad ах ах xor u ah inaad ku darto boggaaga ama astaantaada hadda. Waa ceeb haddii aadan ka faa’iideysan iyaga.
Boutwell waxay si gaar ah kuugula talineysaa inaad isticmaasho SlideShare, “taas oo kuu oggolaaneysa inaad abuurto xog-is-weydaarsi macluumaad ах”. Ka eeg qaanuunka # 6 wixii talo bixin ах haddii aadan mar hore aqrin.
Isticmaalayaal Бадан Ayaa Інта Бадан ISKA indhatira astaantan, waxayna ка xadidaan inay adeegsadaan farriinta xayeysiiska ах її ‘LinkedIn googgeeyaha’ – Waxaan jeclaan lahaa inaan Kugu Су Дара shabakaddayda mihnadlaha ах її ‘LinkedIn’ – laakiin марки сі wanaagsan Лоо isticmaalo, muuqaalku wuxuu ІСА beddelaa qaab cajiib badan oo xoog badan. si loo dhiso aaminaad iyo aaminaad.
Gudaha gaaban waa inuu ka jawaabaa su’aasha aasaasiga ах ee qofka helaya:
Fariin hordhac ах oo fariin:
Привіт! Халкаан Луана Спінетті. Waxaan ahay blogger fadhigiisu yahay talyaaniga oo si xariifnimo leh u jecel robots, sidaada oo kale. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo ka hadalka waxyaabaha xiisaha leh ee aan wadaagno! Ma jeclaan lahayd inaad ku xidho?
8. Рааді Талуойн (Qancin)
Haddii aad dalban lahayd shey internetka ах oo ay soo bandhigaan laba shirkadood, сторона у go’aansan laheyd shirkadda aad ka iibsaneyso? Laga yaabee inaad isbarbar dhig ku sameyso qiimaha shirkadda A iyo kan kale sida shirkad waliba ula dhaqanto shaqaalahooda, laakiin waxaad u badan tahay inaad raadineyso dib u eegista khadka tooska ah ama saaxiiada.
"Si aad uga soo baxdo dadka intiisa badan internetka, waxaa aad loogu talinayaa in aad is dhisto dareen ах kalsooni iyo kalsooni."
Si kastaba ha noqotee, talooyinka ayaa kaliya shaqeeya haddii ay run yihiin (хаа, qof ayaa dhab ahaantii tagi kara oo hubi haddii waxa la sheegayo ay run tahay!). Iyada oo maskaxda lagu hayo, ayaan mar kaliya u soo bandhigay sawirkayga bilaashka ах shabakaddayda iyada oo lagu beddelayo talooyin daacad ah oo loogu talagalay shaqada la qabtay ama akhristayaasha faraxsan ee akhristayaasheed.
Натіяда? Waxaan lahaa jawaabo wanaagsan oo ka helay talooyinka ugu sareeya ee akhristayaasha faraxsan, iyo mid ka mid ah joornaalada kale ee dhabta ах waxay dhab ahaantii sheegteen iyada oo bilaash ah (waxaad arki kartaaaaah ahakan).
9. Isticmaal @mentions iyo Оновлення
Waxaad isticmaali kartaa @therions ee коментарі iyo теми, іyo waxay heli doonaa shabakadaada la ogeysiiyey oo ku lug leh content of aad u dadaal Badan, sida on Twitter.
Sheegashadu waa qalab weyn oo loogu talagalay "вак" labada isku xirnaantaada iyo magacyada kale ee waawayn ama kuwa yaryar ee warshadaha si ay uga qaybqaataan xuruuftaada, oo ay ku jiraan saamileyaal aad rabto inaad ka hesho jawaab celin.
Waxaad wici kartaa "богга" labadaba boggaga iyo boggaga shirkadda, markaa waxa ay ku saabsantahay dhab ahaantiiso badan oo ka mid ah shabakadaada.
Markii la daabacay, ma u adeegsan mapd wax ku saabsan qoraallada ‘Pulse’, laakiin runti waad faallo ka bixin kartaa boostadaada oo waxaad ku dari kartaa halkaas meesha ‘wac’ ilaha aad soo xigatay qoraalka.
Waxaad sidoo kale ka qori kartaa cusboonaysiinta boodhadhkaaga ‘LinkedIn приладова панель’ waxayna yihiin hab waxtar leh oo lagu helo indhaha dadka waxa ku jira, isla markaana lagu abaal mariyo taraafikada, faallooyinka iyo yahayae yyy yayayae yayayae yayayae yayayae yayayae yayayae yayayae yayaeyae yayayae Twitter.
Шон Холл у фідіаа фаа іідада xitaa xisaabaadka shaqaalaha, haddii aad shaqaale leedahay. "Hubso in shaqaalahaagu ay si joogto ah ugu dhajin karaan waxyaabaha laxiriira wershadaha akoonkooda shaqsiyadeed, kuwaas oo kuxiran bogga shirkaddaada," аюу ірі. "Waa inay sidoo kale la wadaagaan cusboonaysiinta kuwa raacsan si ay u kordhiyaan gaaritaanka iyo hawlgelinta."
ААД ayey muhiim у tahay в Лоо dhiso joogitaanka Хадка internetka й ganacsigaaga ама блог-gaaga Їх bogagga shirkaduhu WAA aalad bilaash ах оо Вейна оо AAD ка kasban karto taageerayaashaada Їх dadka ка dhaqanaga ама warshadahaaga оо ка вушко ле cusbooneysiinta gaarka ах й л xiriira bartaada, kaliya maahan naftaada. (Adeegso talooyinka si aad hawsha u fududeyso! Eeg Xeerka № 9.)
Зал Sida Sean u dhigo:
В аад хайсато болото ширкаде воска куу оголаанейсаа інаад ла шакейсид таагераяшаада, ла вадаагно фурсадаха шаоее сууртогалка ах, ийо инаад нокото середина лагу кальсоонаадо бульшада дехексдееда. Waxa kale oo ay noqon kartaa goob kale oo aad ku wadaagtid wax kasta oo cusub oo aad sii deyneyso waana hab weyn oo aad kuugu soo celin karto boggaga internetka. LinkedIn waxay kaa caawin kartaa inaad ka takhalusto tartamayaashaada, halka sidoo kale kaa caawinaya inaad iska hubiso waxa ay tartankaagu qabanayaan.
Xaqiiqdii, ka faa’iideysiga kanaalka kaniisadan – oo sidoo kale la yimaada baaritaankeeda u gaar ah si loo kormeero sida waxtarkaagu uugu cusboonaado – waxay ka faa’iideysan kartaa istiraatiijiyyaada suuqgeynta.
Si kastaba ha ahaatee, Swapnil Bhagwat, oo ah maamulaha sare ee Orchestrate Technologies, LLC, wuxuu ka digayaa в "haysashada bogeeda shirkadda LinkedIn iyo ku dhajinta waxyaabaha ku saabsan sida iyo marka aad jeceshahay inaysan ku wadi karin ka qaybqaadashada la rabo. Caqabada ах у ла qabsado [fiiro gaar ah] isticmaalka LinkedIn waa mid aad u kacsan, iyo in aad hesho muuqaalkaaga muuqaalka u baahan yahay dadaal dheeraad ах. "
Intaasi kuma filna, в багряному болоті заграє. Waa inaad sii noolaataa oo aad haraysaa si aad uga qaybgasho dhagaystayaashaada oo aad uga faa iideysato. Сіде? Bhagwat wuxuu soo jeedinayaa:
Ku dar boggaaga LinkedIn dhamaan noocyada wadaagga bulshada sida Буфер ama HootSuite. Sidoo kale, [waxaad ku gaari kartaa] qaybo kala duwan [oo leh] Xulashada Targeting, taas oo u oggolaanaysa shirkadaha inay bartilmaameedsadaan dhagaystayaal gaar ah – oo ku saleysan naafanimada iyo shaandhooyin kale – oo leh wah wax wah.
Hall wuxuu kaloo ku daray in bogga shirkadda ‘LinkedIn’ uu kuu oggolaanayo inaad la xiriirto macaamiisha suurtagalka ах adigoo la wadaagaya waxyaabaha la xiriira websaydhka, kaqeybgal fadhiyada Q&A, ama xitaa soo bandhigid wicitaan ficil soo koobitaankaaga. "
Кельвін Цзян, CFA, aasaasaha Buyside Focus, waxay isticmaashaa LinkedIn si ay ugu suuq geyso meheraddiisa oo ay u soo saarto inta badan wadooyinkiisa. Тільмаанта Цзян ваа "in la cusbooneysiyo shirkaddaada oo la taabto oo la beddelo."
Ka feker mawduucyada la xidhiidha dhegeystayaashaada oo ku dheji kara xiriirro tayo sare leh bogga shirkaddaada. Tani waxay ku jiri doontaa akhristayaasha blogka ee ku habboon, sawirada, fiidiyowyada, iyo jadwalka wareega ee shabakadaada internetka. Dadka raacsani waxay arki doonaan xiriirinta mawduucaaga si toos ах bogooda hore ee LinkedIn, taas oo keenta isbedel sare. Tani waa hab weyn oo lagu gaari karo gaadiidka shabakadaada iyo soo jiidashada taageerayaal dheeraad ах bogga shirkaddaada.
Dhanka cusboonaysiinta, Sarah Boutwell waxay kugula talineysaa inaad ilaaliso “joogteyn ku dhajinta boggaaga ganacsiga. Хадді хібрадейда maareeyaha warbaahinta bulshada ay i bartay wax walba, waa in waqtiga iyo joogtayntu ay yihiin labo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee maskaxda lagu hayo markii la isticmaalayo baraha bulshada.
LinkedIn waa jawi xirfad badan oo hubaal ах, laakiin taasi micnaheedu maahan inaadan noqon karin bulsho isla markaana aad u tagtid xubnaha shabakadaada haddii aad u maleyneyso in wax aad soo dhejiso ay iyaga khusayso. Is dhajinta badanaa мав iyo jeer waa wax u fiican ka qeybqaadashada iyo in sumaddaada halkaas uun lagaaga helo. Si kastaba ha noqotee, ha ku buufin qof kasta. Hubso inaad ku daro noocyo kala duwan, sida ku darista sawir ama soo bandhigida SlideShare markasta iyo ka dib.
Cusboonaysiinta boostada. Samee iyaga la riixi karo oo diirada la saarayo. Tani waxay dhalinaysaa taraafikada boggaaga internetka waxayna soo jiidataa taageerayaal dheeraad ах bogga shirkadda LinkedIn.
БОНУС №1 – Ku xayeysii LinkedIn
Хаддіаадан вакті ійо маал аад у бадан у qoondeyn карін suuq-geynta gudaha, waxaad мав iyo jeer ku xayeysiin kartaa LinkedIn.
Sean Martin wuxuu kugula talinayaa inaad “hagaajiso ololehaaga aad begsatay [oo aad] iskuday inaad geliso liistada liistada liiska ama cinwaanka emaylka ee LinkedIn, sidaa darteed waad yareyn kartaa dhagaystayaashaada xayee Kadib waxaad isticmaali kartaa LinkedIn сі AAD угу dirto xayeysiimaha tooska ах й aargoosi у ах isticmaaleyaashan sidoo калі waxaad у abuuri kartaa dhagaystayaal чи середину ах сі AAD угу badiso tirakoobka dadka isticmaala й AAD awood у yeelatay inaad ка Су saarto. Waa nooc ka mid ah cuntada loo isticmaalo soo celinta guulihii hore ee jiilka hoggaaminta. “
Waxaad sidoo kale "isticmaali kartaa posts спонсоровані пости oo ku xiran bogagga soo degsan halkii laga heli lahaa qaybo" iyo Martin wuxuu sharxayaa sida:
Waxaa jira laba nooc oo ah xayeysiisyada LinkedIn waxaad u isticmaali kartaa mawduucaaga ama boggagaaga. Marka ugu horeysa waa xayeysiiska caadiga ах ee caadiga ах, tan labaadna waa xayeysiisyo maalgalin ах. Midka labaad waa ka weyn oo isticmaal sawirro si loo xayeysiiyo halkii laga heli lahaa qoraalka qoraalka caadiga ах. Waxay u arkaan guji sare oo loo marayo heer ka sarreeya xayeysiisyada caadiga ах, taas oo macno samaynaysa.
Badanaa, dadku waxay isticmaalaan kuwan xayeysiin ах ах lagu guuleysto si kor loogu qaado qaybahooda cusub. Inkasta oo tani ay tahay hab weyn oo lagu hormarin karo qaybaha cusub, waxaad isticmaali kartaa in sicirka sarreeya iyada oo loo marayo qiimaha fursadaha ugu fiican. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa boggaga gaarka ah ee soo degitaanka iyo isku xirnaanta kuwa xayeysiisyadaada la xayeysiinayo si ay u abuuraan dib-u-celin halkii aad ka heli lahayd hogaaminta. Waxaad dooneysaa inaad ka faaiidaysto gaadiidka ugu awoodda badan ee aad awoodi karto halka ay ugu muhiimsan tahay.
БОНУС №2 – Istaraatiijiyooyin LinkedIn ах
Carey Dodd, maamulaha suuq-geynta Siren Group, iyo Oren Greenberg, labadooduba waxay wadaageen istaraatiijiyad-tallaabo tallaabo tallaabo ah ee aga uga faa’iideysan karaan kuwa loo yaqaan ‘LinkedIn’. Waxaad ka heli doontaa inta badan talooyinkii lagu siiyey xeerarkii hore, oo ay kujirto xoogaa aragti gaar ах ах oo ka soo baxday khibraddooda tooska ах.
Carey Dodd ayaa sheegtay в "fure u ah helitaanka maadadaada la ogaaday in ay sii socoto ніша", iyo in ay taas sameeyaan:
Tusaale ahaan, taxanaha Siren Group waxaa ka mid ah helitaanka biilasha Nafaqada Caymiska, Shirkadaha Fashion E-Commerce iyo kuwa horumarinta ciyaaraha Bulshada.
La wadaag warshadaha warshadaha ee la xidhiidha – мав iyo jeer abuur sawir ah boosto kasta si loo helo ka qaybqaadasho wanaagsan.
Iyadoo la isticmaalayo miisaan yar, isticmaal Isticmaalka LinkedIn si aad ugu dallacdo boggagaaga blog-ka ku yaal bogga bandhigga (samee dhagaystayaasha la begsanayo natiijooyinka ugu fiican). Tani waxay kaa caawineysaa inaad kor u qaado taageerayaasha boggaaga.
5. Fariin Twitter ах у дир @LinkedInPulse adigoo xiriirinaya maqaalka Pulse
Хубі в maqaalkaaga Pulse uu wadaagayo, uu jecel yahay, iyo dadka ka faaloonaya saacadaha ugu horeeya ee 48 ee daabacaadda (waydii asxaabta / qoyska / asxaabta). Tani waxay siin doontaa fursada weyn ee lagu helayo LinkedIn.
6. U samee kooxda LinkedIn сі також ах
Soo jeedi rajooyin muhiim ah si aad uga qayb qaadatid kooxdan, wadaag waxyaabo waxtar leh oo la la xidhiidha. Markaad sameysid koox, waxaad awoodi kartaa inaad la xiriirto oo aad fariin toos ах ugu dirtid xubnaha kooxda.
Fariimaha Цільове призначення: Istaraatijiyad Tallaabo-tallaabo ах
1. Samee boosto qurxoon. Ku dar sawirro (sawirro, fiidiyo, iwm.) Iyo xitaa qayb ka mid ah madadaalada, sababtoo ах "jilicsanaanta iyo bini’aadamku wuxuu ku darayaa heer cusub oo buuxa shabakada cadaanka ах.
3. U dir codsi shakhsiyeed si aad isugu xirto – u sheeg wax yar oo ku saabsan farriinta xidhiidhka: waxay u socotaa wadada dheer ee qofka kale haddii ay ku arkaan inaad wakhti la qaadatay iyaga. (Eeg Qodobka №2)
4. Jaantus saar 10-20 kuwaas oo si aad ah loola beegsan yahay oo ku ku habboon qodobka iyo, ka dib markaad hesho ugu yaraan 10 ee xiriiriyeyaasha cusub ee la beegsanayo ee shabakadaada, daabac boostada oo waliba qaybtaas la wadaag kooxahaas. Waxaad xitaa xitaa вади kartaa warsideeyaal ка sheekeynaya dhagaystayaasha AAD adigu Калій daabacday maqaal, оо aadan Рабін inaad віск iibisid – haddii AAD caddeyso qiimaha, dadku waxay куу іман doonaan adiguna waxaad dhisi kartaa xiriir Ій Лаг yaabaa inaad kasbato macaamilka nolosha.
"Tani waxay umuuqataa inay tahay shaqo badan," ayuu yidhi Грінберг, «laakiin natiijooyinku waxay у hadlaan naftooda – mararka qaar xitaa 5k + aragtiyo ка saabsan qodobbadaas Ії в ка Бадані saamiyada 100. La ультраабіссаль dhagaystayaashaada оо ка dhamee su’aal -« Tani waxay ahayd fahamkeyga arrinta, waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo waxaaga ‘- faallooyinka ayaa leh awood aad u badan marka ay ka muuqdaan quudinta dadka, isu imaatinka, iyo kobcinta aragtida.
Adiga ayaa kugu habboon – waa maxay waxa aad karineysid sirta ах ee suuqgeynta wax ku oolka ах ee la xiriirto suuqgeynta LinkedIn? Nala soo socodsiiya kanaalkeena bulshada.